Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Dalxiiska » Soo kabasho buuxda oo socdaalka caalamiga ah ayaa la filayaa 2025
Bixinta caalamiga ah waxay gaari doontaa 68% heerarkii COVID-19 ka hor aduunka 2022 waxaana la filayaa inay sare u kacdo 82% 2023 iyo 97% 2024, ka hor inta aan si buuxda loo soo kabsan 2025 ee 101% ee 2019 heerarka, iyadoo la saadaaliyay. 1.5 bilyan oo socdaalo caalami ah.
Si kastaba ha ahaatee, jihada dib u soo kabashada ee bixitaannada caalamiga ah maaha mid toosan gobolada ama wadamada.
Socdaalka caalamiga ah ee Waqooyiga Ameerika ayaa muujiyay horumar sanadka 2021 iyadoo bixitaannada caalamiga ahi ay kordheen 15% sanadba sanadka ka dambeeya. The USA wuxuu u kacay inuu noqdo suuqa safarka dibadda ee ugu weyn aduunka 2021. 2022, ka bixida ka bixida Waqooyiga Ameerika waxaa la saadaalinayaa inay gaaraan 69% ee heerarka 2019, ka hor inta aysan si buuxda u soo kabsan 2024, 102% ee heerarka 2019, ka hor gobolada kale.
Ka bixista caalamiga ah ee wadamada Yurub ayaa la filayaa inay gaaraan 69% ee tirooyinka 2019 ee 2022. Sida kalsoonida safarka dib u soo kabashada, suuqa gudaha Yurub ayaa la filayaa inuu ka faa'iidaysto, oo ay hogaaminayaan doorashooyinka safarka gaaban.
Si kastaba ha ahaatee, soo kabashada safarka waa in ay la dagaallanto sicir bararka, kor u kaca kharashka nolosha, iyo dagaalka Ukraine. Marka la gaaro 2025, bixitaannada caalamiga ah waxaa la saadaalinayaa inay noqdaan 98% ee heerarka 2019. Juquraafi ahaan, dagaalku kuma fidin meel ka baxsan xudduudaha Ukraine. Si kastaba ha ahaatee, Ruushku wuxuu ahaa suuqa shanaad ee safarada dibadda ee ugu weyn adduunka 2019, halka Ukraine ay ahayd laba iyo tobnaad. Horey u socoshada, socdaalka xaddidan ee ka baxa wadamadan ayaa caqabad ku noqon doona soo kabashada guud ee dalxiiska Yurub.
Aasiya-Pacific ayaa la filayaa inay dib u dhacdo xagga soo kabashada. Ka bixista dibedda ee gobolka waxay gaari doontaa kaliya 67% ee heerarka 2019 sanadka 2022, taasoo ay ugu wacan tahay ka saarista xad-dhaafka ah ee xannibaadaha safarka, iyo u janjeersiga xannibaadaha gudaha ee cusboonaysiinta inta lagu jiro dillaaca COVID-19. Marka gobolka iyo adduunka ugu weyn suuqa safarka dibadda, Shiinaha ma muujinayso wax calaamado ah oo lagu dejinayo tallaabooyinkeeda adag ee xuduudaha muddada gaaban. 2021, bixitaannada caalamiga ah ee Shiinaha waxay ahaayeen kaliya 2% heerarka 2019.
Iyadoo safarka caalamiga ah ee caalamiga ah lagu wado inuu ka soo kabsado heerarkii hore ee masiibada marka la gaaro 2025, baahida dalxiisku waxay u ekaan kartaa mid aad uga duwan. Laga soo bilaabo laba sano oo safar aad u xaddidan, dhowr isbeddel oo mustaqbalka fog ah iyo isbeddellada muddada-gaaban ayaa soo baxay. Macaamiishu waxay hadda aad ugu dhow yihiin inay raacaan waayo-aragnimada dhabta ah, waxay dalbadaan wax-soo-saarka safarka, isku-dhafka ganacsiga iyo safarka firaaqada, iyo inay aad uga digtoonaadaan saameyntooda guud ee deegaanka.
Weli waxaa jira waddo dheer oo loo maro si loo gaaro xaalad caadi ah. Si kastaba ha ahaatee, soo kabashada buuxda ee suurtogalka ah ee 2025 ugu dambeyntii waxay siinaysaa sabab wanaagsan oo ah socdaalka iyo warshadaha dalxiiska si ay u noqdaan kuwo rajo leh mustaqbalka.
soo kabashada safarka caalamiga ah duullimaadyada caalamiga ah